Alaabta caadiga ah, Sariiraha caadiga ah iyo Soofa | James Bond
James Bond Furniture waxa uu diiradda saarayay alaabta guryaha ee caadiga ah ee raaxada muddo 18 sano ah.
Alaabooyinka caadiga ah ee raaxada
Shaxda kafeega Classic
Golaha Wasiirada TV Classic
Sariirta caadiga ah
Miiska sariirta ee caadiga ah
Miiska Cuntada ee Classic
Kursiga Cuntada caadiga ah
Kursiga madadaalada ee Classic
Diirada saar alaabta guriga ee raaxada ee caadiga ah
Doorashada ugu fiican ee dadka guuleysta
Hadafkayagu waa in aan ku qancino macaamiisheena tayada sare leh oo la isku halleyn karo si loo hubiyo in macaamiil kastaa uu dareemo raaxo iyo kalsooni alaabtayada codsiyadooda.Badeecooyinkayagu waxay si ballaaran u helaan codsiyadooda suuqa sababtoo ah guryaha wanaagsan. Waxay leeyihiin astaamo badan oo dammaanad qaadaya faafinta iyo adeegsiga.
Alaabta fadhiga ee caadiga ah James Bond 14k dahab ah iyo alwaax adag oo iftiin brown A2820
James Bond alaabta guriga waxa ay diirada saartaa alaabta guriga caadiga ah ee dhamaadka-sare waxayna soo saartaa fadhiyo fadhiyo tayo sare leh oo raaxo leh. Fadhigan fadhiga ee raaxada ah waa mid ka mid ah noocyada alaabta guryaha ee James Bond ee sida aadka ah loo iibiyo waxaana isticmaala dad badan oo caan ah, dad caan ah iyo aristocrats. Sababtoo ah waa mid aad u cajiib ah, sidoo kale aad u raaxo leh, waxay noqon kartaa mid aad u wanaagsan si loo muujiyo aqoonsiga iyo heerka milkiilaha.Qalabka James Bond waxaa lagu iibiyaa in ka badan 60 waddan oo dibadda ah, si adag ayaan u shaqaynaynay, waxaan rajaynaynaa in isticmaaleyaal badan oo adduunka oo dhan ahi ay la kulmi karaan James Bond si taxadar leh u soo saaray alaabta guryaha caadiga ah.
Alaabta fadhiga caadiga ah 14k dahab ah iyo dahab alwaax adag ah&champagne A2819 James Bond
SHARAXAJames Bond Classic sofa furniture 14k dahab ah iyodahab alwaax adag &champagne A2819FAAHFAAHINTA AlaabadaQalab: French Beech\_Hargaha\_14kGold Qalabka fadhiga: Haragga Midabka maqaarka: Maariin khafiif ah Midabka alwaax: champagne
James Bond Classic sariir naqshad 14k dahab ah iyo alwaax adag buluug buluug ah JP644
James Bond Classic korantada miiska cuntada iyo alwaax adag oo leh rinji biyaano ah Brown JF522
SHARAXADahab Brown Classic ah iyo alwaax adag oo leh resin biyaanorinji korantada cuntada wareegaFAAHFAAHINTA AlaabadaQalab: Beesh FaransiisCabbirka: 220W×220D×76H 300W×300D×76H 380W×380D×76HMidabka alwaax: BUNNI
Sofafurniture casri ah oo 14k dahab ah iyo alwaax adag A2803 cawl fudud
James Bond sofafurniture casri ah oo casri ah 14k dahab ah iyo alwaax adag A2803 cawl fudud.
Alaabta fadhiga caadiga ah 14k dahab ah iyo alwaax adag cad / cagaar qoto dheer / bunni / JF508
James Bond alaabta guriga fadhiga caadiga ah 14k dahab ah iyo alwaax adag cad / cagaar qoto dheer / bunni / JF508.
Gogol-dhigashada fadhiga caadiga ah waxay nashqadaysaa qaabka raaxada 14k dahab ah iyo alwaax adag JF508 bunni sare ah
James Bond fadhiga fadhiga caadiga ah wuxuu nakhshadeeyaa qaabka raaxada 14k dahab ah iyo alwaax adag oo cagaar qoto dheer JF508.
James Bond Classic sofa design 14k dahab ah iyo buluug bad adag A2825
James Bond Furniture wuxuu diiradda saarayay raaxada tayada sare leh ee alaabta guryaha caadiga ah muddo 18 sano ah. Macaamiil badan ayaa sheegaya in alaabta guriga ee James Bond ay sameeyaan alaab guri oo caadi ah oo la mid ah alaabta guryaha caadiga ah ee Talyaaniga. Haa, waxaan u dirnaa kooxdayada wax soo saarka iyo kooxda naqshadeynta Talyaaniga sanad walba si ay u bartaan farsamada wax soo saarka iyo fikradda naqshadeynta alaabta guriga ee Talyaani ee ugu fiican, si alaabta guriga ugu fiican loo keeno macaamiisha adduunka oo dhan.Sarifkeena caadiga ah waa mid aad loo jecel yahay sababtoo ah si fiican ayaa loo xalliyaa si faahfaahsan, soona bandhigaya dareen jilicsan, dareen raaxo leh iyo dareen caadi ah.
James Bond Furniture waxa uu muddo 18 sano ah ku takhasusay agabka guryaha ee caadiga ah, waxaana alaabtiisa laga iibiyaa 52 waddan oo adduunka ah. Si taxadar leh u dooro agab tayo sare leh, la kaasho kooxda naqshadaynta khibrada leh iyo kooxda wax soo saarka, oo keen farsamada dhaqanka ee wanaagsan ee Talyaaniga Shiinaha.
Si guul leh loo dhameeyay dhowr mashruuc oo aad u wanaagsan
1. Mashruuca Qoyska Boqortooyada Malaysia
2.Mashruuca Madaxtooyada Afrika
3. Mashruuca Hotel-ka Six-star ee Dubai
4. Mashruuca shirkadda naqshadeynta caanka ah ee Dubai
5. Mashruuca Villa Fannaanada caanka ah
6. In ka badan 100,000 mashruuc, sida mashruuca Villa star-ga caanka ah
Mashruuca macmiilka Dutch - alaabta guriga caadiga ah ee James Bond Furniture
Soofada caadiga ah ee uu doortay macmiilka Nederlaand waa qaabka ugu iibinta badan ee James Bond Furniture. Waxay iibisay sanado 18 ah, fikradeeda naqshadeynta ayaa laga soo qaatay silsiladda haweeneyda quruxda badan. Qaabku waa qurux iyo dhadhan. Marka lagu daro dusha sare ee talyaaniga ee qaaliga ah oo lagu duuduubay lo'da, aad bay u qiimo badan tahay, waa doorasho weyn!Macaamiisha Nederlandiya waxay isticmaaleen laba miis oo qurxin ah, kuwaas oo ka ciyaari kara saameyn qurux badan oo aad u wanaagsan, si ay meesha gaarka ah u muuqato inay leedahay jawi!
Mashruuca macmiilka Shanghai - alaabta guriga caadiga ah oo tayo sare leh oo laga keenay alaabta guriga James Bond
Guryaha cusub ee macaamiisha Shanghai waa dhammaan alaabooyinka taxanaha summada alaabta guryaha ee James Bond. Suudhka fadhiga fadhiga ee buluuga ah ee raaxada leh ayaa la isticmaalaa, iyo kursiga qadada ee caadiga ah ee midabka isku midka ah waa la isku dhejiyay. Sariirta caadiga ah ee qolka jiifka sidoo kale waa mid aad u qurux badan.Qalabka James bond waa doorashada dadka guuleysta, tayada sare leh, alaabta guriga caadiga ah oo leh qaab, waxay si weyn u kordhin kartaa jawiga guriga iyo awoodda iyo xuquuqda milkiilaha!
Tayada Sarreysa ee Guriga Shiineeska ee Ingiriiska-James Bondka Alaabta caadiga ah Jumlo-
Qalabka caadiga ah ee tayada sare leh, James Bond alaabta guriga caadiga ah waa wakiil. Waxaa naga go'an inaan abuurno alaab tayo sare leh, alaab guri oo raagaya, ku qanacsanaanta macaamiisha, waa raadinteena. Laga soo bilaabo alaab tayo sare leh ilaa shaqo fiican, waxaanu leenahay heerar adag, si qayb kasta oo alaabta guriga ah ee James Bond laga dhigo gabal alaabo tayo sare leh.
Xirfadlaha James Bond Soosaarayaasha Mashruuca Villa Weyn
Xirfadlaha James Bond Soosaarayaasha Mashruuca Villa Weyn. James bond alaabta guriga caadiga ah waxaa ka go'an in ay abuurto alaab guri oo heer sare ah oo heer sare ah. Waxaan keennay alaab ceeriin ah waxaanan soo bandhignay farsamooyinka wax soo saarka Talyaaniga. Intaa waxaa dheer, waxaan shaqaaleysiinay dhowr sayid oo farshaxan ah oo leh 10-20 sano oo waayo-aragnimo ah si ay u isticmaalaan farsamooyin farshaxan oo saafi ah si ay u muujiyaan qiimaha alaabta guryaha caadiga ah. James Bond alaabta guryaha caadiga ah ayaa si guul leh u dhamaystiray dhawr mashruuc oo villa ah, mashaariic huteelo iyo mashruucyo dabaq ah. Waxaan horumarinay tayada badeecadaha iyo adeegga macaamiisha.
James Bond Furniture waxaa la aasaasay 2003dii saldhigga caanka ah ee wax soo saarka alaabta guriga - magaalada LongJiang, degmada shunde, magaalada Foshan, oo daboolaya aag ka badan 50,000 mitir oo laba jibbaaran, taas oo ah wax soo saar, iibinta guriga-dhamaadka sare ee alaabta guriga ee Yurub. , miiska, miiska shaaha waxyaabaha taxanaha ah ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. Muddo 18 sano ah, James Bond Furniture wuxuu u hoggaansamaa heerarka anshaxa ee joogtada ah, Ka go'an qaadashada xeerarka, dhaqanka shirkadaha hufan iyo qaabka horumarinta joogtada ah, iyo helitaanka aqoonsiga warshadaha, wuxuu ku guuleystay "Top 10 warshadaha iftiinka ee Shiinaha", "Heshiiska Qaranka iyo shirkadda credit", "Gobolka Guangdong muddo 15 sano oo isku xigta si ay ugu hoggaansamaan qandaraaska iyo shirkadaha credit" horyaalka "Tobanka nooc ee Yurub iyo Ameerika ee ugu sarreeya ee alaabta guryaha Shiinaha".
James Bond Furniture wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Talyaaniga oo leh dhiig sharaf leh, u hoggaansamaya dhaqanka, xulashada adag ee alaabta, la safeeyey, iyadoo la adeegsanayo habka wax soo saarka talyaaniga ee saafiga ah, si loo hubiyo tayada ugu fiican. Laga soo bilaabo lakabka alwaax dabiici ah oo saafi ah ilaa dusha rinjiga piano ee dhalaalaya oo dhalaalaya, guddi qaali ah oo naadir ah...Iyada oo aan laga reebin dhiirigelinta ururka xariifka ah ee vogue iyo farshaxan dhaqameed, alaab guri ha noqdaan kuwa qurxan ee guriga qurxiyaa. James Bond farsamayaqaanku waxa uu dhaxlay boqolaal sano oo farshaxan iyo hiddo dhaqameed ah, waxa uu geliyey xamaasad iyo dhiirigelin abuurista fanka, waxana uu ku dadaalaa in uu abuuro farshaxanka ugu qumman.
James Bond Furniture waxa ay u keentaa quruxda gurigaaga
Mid kasta oo ka mid ah fariimahaagu waa sharaf
Alaabta caadiga ah ee raaxada
fadhiga caadiga ah
miiska cuntada Classic
Agaasimaha iibka ee Amir Chen
Tel&WhatsApp:+86 131 1272 1616
Cinwaanka: JAMES BOND FURNITURE, kasoo horjeedka saldhiga gaaska ee Lihai, magaalada Longjiang, degmada Shunde, Foshan, Guangdong, Shiinaha.